Tag: xayeysiin ku xiran | Martech Zone
Tag: xayeysiis ku xiran
Maamulaha Ololaha ee LinkedIn wuxuu sii daayaa Khibraddiisa Ka Warbixinta Ololaha
Khamiis, Juun 26, 2018 Monday, July 23, 2018 Douglas Karr
LinkedIn waxay ku dhawaaqeysaa waayo-aragnimo warbixin dib-u-habeyn ah oo loogu talagalay Maareeyaha Ololaha LinkedIn, taasoo sahleysa in la fahmo sida ololayaashaadu u socdaan. Xiriirinta cusub waxay soo bandhigeysaa khibrad nadiif ah oo dareen leh taas oo kuu oggolaaneysa inaad si fudud u maareyso oo aad u hagaajiso ololayaashaada. Waxyaabaha Kormeeraha Maareeyaha Ololaha ee LinkedIn waxaa ka mid ah: Waqti ku kaydi warbixinta wacyigelinta - Khibraddan tabinta ee cusub, waxaad si dhakhso leh u arki kartaa sida ololayaashaadu u socdaan oo aad u sameyso hagaajin duulimaad ah si aad u horumariso natiijooyinka. Xogta ku jirta Ololaha
Thursday, July 26, 2018 Monday, July 23, 2018
3 Siyaabood oo Si Fudud Loogu Uruurin Karo Xogta Fursadaha Foomamka Jiilka Isku-dhafan ee Isku-xidhka 'LinkedIn'
Talaado, Nofeembar 14, 2017 Talaado, Nofeembar 14, 2017 Douglas Karr
LinkedIn waxay sii ahaaneysaa ilaha aasaasiga ah ee ganacsigeyga maadaama aan raadsado rajo iyo lamaanayaal ganacsigeyga ah. Ma hubo in maalin aysan dhaafin oo aanan u isticmaalin koontadayda xirfadleyda ah inaan ku xirmo oo aan la kulmo kuwa kale. LinkedIn waxay sii wadaa inay aqoonsato meelahooda muhiimka ah ee baraha bulshada, iyagoo hubinaya awooda ganacsiyada inay ku xirmaan qorista ama helitaanka. Suuqleyda waxay aqoonsan yihiin in natiijooyinka ururinta macdanta "lead" ay aad u yaraadeen sida rajadu tahay